गुहेश्वरी मर्चेन्टको एजीएम सुरु, १५.७९% बोनस प्रस्तावका साथ अरु के प्रस्ताव पेस गर्दै ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » गुहेश्वरी मर्चेन्टको एजीएम सुरु, १५.७९% बोनस प्रस्तावका साथ अरु के प्रस्ताव पेस गर्दै ?
काठमाडौं - पुस ३० गते गुहेश्वरी मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्सको साधारण सभा गुहेश्वरी भवन, हरिहर भवन ललितपुरमा बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको छ । सभामा कम्पनीले १५.७९% (१० करोड ९१ लाख २४ हजार ९३१ रुपैयाँ)बोनस सेयर वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव पेश गर्दैछ । बोनसपछि कम्पनीको अधिकृत र चुक्ता पुँजी वृद्धि हुने भएकाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि लगिने भएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को वार्षिक प्रतिवेदन सहित २०७४ असार मसान्तसम्मको वासलात लगायत अन्य प्रतिवेदन पारित गर्ने प्रस्ताव पनि छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार गुहेश्वरीको चुक्ता पुँजी ४९ करोड ३४ लाख ८२ हजार १९२ रुपैयाँ छ । फाइनान्सले हालैमात्र ४०% हकप्रद बिक्री गरेको थियो । यो हकप्रदपछि भने कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६९ करोड ८ लाख ७५ हजार ६९ रुपैयाँ पुगेको छ । गुहेश्वरीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १ करोड ५९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १२ रुपैयाँ ९३ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १४५ रुपैयाँ ४० पैसा छ ।